Waraanni Bilisummaa Oromoo sochii kallattii Hundaan Cimsee Itti Fufaa Jira | OROMOTV
Waraanni Bilisummaa Oromoo sochii kallattii Hundaan Cimsee Itti Fufaa Jira
Waraanni Bilisummaa Oromoo sochii kallattii hundaan gara Finfinneetti taasisu cimsee itti fufuu beeksise.
Waraanni kun magaalaa Gidaamii guutummaatti erga to’ateen booda hawaasa waliin mariin taasifamuu, Ajajaa Olaanaan Waraana Bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaas sirnicha irratti argamuun haasaa taasisuu Odaa Tarbii ibsaniiru. Ajajaa Olaanaan WBO Marroo Dirribaa haasaa taasisaniin, Imalli waraanni Bilisummaa Oromoo yeroo ammaa itti jiru kallattii hundaanuu gara Finfinneetti ta’uu ibsaniiru jedhan.
Gama biroon Waraanni Bilisummaa Oromoo Waraana Bilisummaa Gambeellaa waliin ta’uun humna haaraa Lixa Oromiyaatti leenjisaa ture eebbiseera.
Sirna Eebba kanaa irratti, Ajajaan Waraana Bilisummaa Gambeellaa Gatluwak Buom, waraanni waloon leenji’e kun eebbaaf qaqqabuutti kan gammadan ta’uu ibsuun, tumsa waraanni bilisummaa Oromoofi Ajajaan WBO Marroo Dirribaa, waraanni bilisummaa Gambeellaa akka jabaatuuf taasisaa jiran galateeffataniiru.
Sochiin waraana bilisummaa Oromoo Lixa Shaggarittis jabaatee itti fufuun kan ibsame wayita ta’u, iddoowwan lolli WBO waliin geggeeffamaa jiru hedduutti tajaajilli interneetii adda citeera.
Naqamtee irraa eegalee daandiin gara Lixa Oromiyaatti geessus cufamuu odeeffannoon qabnu nimul’isa.